यी हुन् भगवान शिवको प्रिय अक्षरहरु ! जसबाट नाम सुरु हुने व्यक्तिले सधै पाउँछन् शिव भगवानको आशिर्वाद ! – MediaNP
काठमाडौँ । भन्ने गरिन्छ हरेक व्यक्तिको रुप भगवान अनुसार फरक फरक हुने गर्छ । भगवानले हामी भित्र हुने कुनै पनि कुरालाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । हरेक भगवानलाई उचित तरिकाले पुजा आरधना गर्न सकेमा भगवानको आशिर्वाद प्रचुरमात्रामा पाइने धार्मिक विश्वास रहेको छ । यस्तै भगवान शिवको प्रिय केही अक्षरहरु रहेका छन् । जसले सधै शिव भगवानको आशिर्वाद पाइरहन्छन् ।
R. नाम शुरु हुने : यो अक्षरबाट नाम शुरु हुने व्यक्तिहरु भगवान शिवको अंश हुने गरेको पाइएको छ । उनीहरु भगवान शिव जस्तै शहनशिल मेहनती र शक्तिशाली हुने गर्छन् । उनीहरुको दैनिकीमा भगवान शिवको विशेष आशिर्वाद हुनेछ ।
C. बाट नाम शुरु हुनेहरु : यो अक्षरबाट नाम सुरु भएका व्यक्तिहरु आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने भएकाले रिसको समयमा जे पनि गर्ने गर्छन् । यद्यपी उनीहरु बिना कारण क्रोधित भने हुँदैनन् । अरुलाई धोका दिने कुरामा उनीहरु निकै अगाडी रहेका हुन्छन् । शिवको आरधनामा रहेन भएकाले उनीहरुको प्रति शिव छिट्टै प्रसन्न हुन्छन् ।
P. बाट नाम शुरु हुनेहरु : यो अक्षरबाट नाम सुरु भएका व्यक्तिहरु हरेक असफलतमा आफुलाई प्रयासरत राखिरहन्छन् । उनीहरु आफ्नो दुख अरुलाई बाड्न चाहदैनन् जसले गर्दा भित्र भित्रै पिडाले जलिरहेका हुन्छन् । उनीहरु आफ्नो दुख भगवानसँग पोख्नमा विश्वास गर्छन् । जसले गर्दा शिव भगवान उनीहरुसँग सधै नजिक हुन चाहन्छन् ।
पाल्पाका दर्लामी चौध दिनदेखि सम्पर्कविहीन,खोजी गरिदिन परिवारको आग्रह
काठमाडौं र अपराध महाशाखाको प्रमुखमा सुवेदी र थापालाई जिम्मेवारी ,लामा र शाहलाई हटाइयो